Fandefasana ny seranam-piaramanidina Madrid ✅ transfisy amin'ny seranana ✅ minibus Barajas vip Fandefasana ny seranam-piaramanidina Madrid ✅ transfisy amin'ny seranana ✅ minibus Barajas vip
Famindrana ho an'ny vidin'ny seranam-piaramanidin'i Madrid Barajas
Mitady ny serivisy fampitaovana serivisy tsara indrindra Madrid mankany afovoan-tanàna?
Famindrana avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Barajas Madrid mankany afovoan-tanàna; Izany dia nataon'ilay orinasa Torres Bus.
Tsy manome ny mpanjifa maherin'ny 50 taona, fanaovana famindrana avy amin'ny seranam-piaramanidina hevitra ny Madrid, na avy ao amin'ny foibe, (Piazza Espaina, Hortaleza, Las Rozas, Majadahonada, Pozuelo de Alarcon, Getafe, Leganes, Mostoles, Alcorcon, Pinto , Parla, Ciempozuelos, Arganda, Alcala de Henanres, San Fernando de Henares, Torrejon de Ardoz, sns ...)
Ny iray amin'ireo toerana fifandraisana lehibe na fiarandalamby na ny rivotra, toy ny seranam-piaramanidina ao Madrid (T1, T2, T3 na T4), na Atocha Ave, renfe na amin'ny toby. Afaka mangataka famelabelarana ianao
Anarana sy anarana
elektronika namany Sary
Daty sy ora nanaovana ny fahatongavana na ny fialana
Fotoana ora [ora ora: format: HH: mm]
Flight of Origin
Raha hiverina na hiverina
Daty sy vanim-potoana (OPTIONAL)
Ora [ora ora fiverenana: format: HH: mm]
Asehoy fa olona ianao
Azontsika atao ny mamaha ny olan'ny fiatrehana ny seranan-tsambo madinika any Madrid, na eo amin'ny seranan-tsambo 1 - 2 - 4, atocha na toerana hafa na toeran'ny vondrom-piarahamonina Madrid.
Madrid transfer transfer
Ny fividianana minibus dia nanjary nalaza be, toy ny fomba azo antoka sy ara-toekarena mba hitaterana vondron'olona lehibe kokoa sy ny entany ary ny entana. Mianara minibus manokana, mankany amin'ny seranam-piaramanidin'ny Madrid ary avelao ny mpandeha rehetra hiara-hiaina, amim-pahasambarana ary amim-pilaminana.
Raha mitady fiarandalamby fiaramanidina Madrid ianao miaraka amin'ny mpamily, a 7 olona minibus, na hatramin'ny mpandeha 16 any amin'ny seranam-piaramanidin'i Madrid, na mila mandoa vola amin'ny fomba iray ianao, dia eo amin'ny toerana mety ianao; Mifidiana iray amin'ny tolotra tsara indrindra, minibus na fiara fitaterana.
Mila fiara fitaterana fiara madinika ho an'ny famindrana fiantsonan'ny fiaramanidina Madrid ve?
Manontany tena ve ianao hoe aiza no azoko anofana minibus? Ao amin'ny Bus Torres, manana izany ianao.
Inona no vidin'ny vidin'ny fanofana fiara madinika amin'ny famindrana fiantsonan'ny seranam-piaramanidin'i Madrid na iza no mpandeha fiara tsara indrindra amin'ny vahoaka 12? Eny ary, aza manahy, Torres Bus dia eto mba hanampy anao hahazo ny fifanarahana tsara indrindra ho an'ny fanofana fiaramanidina idealy anao.
Na inona na inona ny toerana na ny haben'ny mandeha amin'ny tarika misy anao, Torres Bus, Coach manakarama sy minibuses, dia ho faly hanampy anao mifidy ny minivan na minibus mpandeha ho an'ny famindrana Airport Madrid izay tiany ny zavatra ilaina sy ny teti-bola.
Jereo ny soso-kevitrao fanofana mpanazatra ary ny minibuses eto, ka boky iray minibuses mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina ao Madrid, manana safidy malalaka, anisan'izany ny fiara Mercedes minibuses, minibus manakarama amin'ny fitaovana GPS na mora minivans hofan-trano, misy amin'ny tanàna rehetra akaikin'i Madrid anisan'izany ny seranam-piaramanidina, tanàna sy vondrom-paritra manerana ny Community of Madrid.
Miantoka ny fiara madinika sy fiara mora indrindra amin'ny seranam-piaramanidin'i Madrid izahay, raha ampitahainay ny vidin'ny farany indrindra, avy amin'ireo orinasam-pifandraisan'ny mpamily sy ny maro hafa. Soraty amin'ny tranokala minivanina manaraka na famindrana fiara an-tserasera amin'ny aterineto, ho anao Madrid transfer transfer na antsoy ny mpanjifa amin'ny WhatsApp + 34 607372252, e-mail na telefaonina ho notsongaina, Pricing bebe kokoa fanazavana na mba hanampy anao hanao ny famandrihan-toerana ho an'ny mpandeha microbus Madrid Airport.
Fanofana minibus sy minibus miaraka amin'ny mpamily ao amin'ny seranam-piaramanidina Madrid
Fanofana ny minivan na minibus dia tsara, rehefa mandeha miaraka amin'ny vondrona 6 / 7 na mihoatra: ny malalaka trano kely, configurations seza lava sy malefaka seza sy ny entana toerana lehibe kokoa ho an'ny kitapom- Manolotra fandriam-pahalemana izy ireo sy ny mpandeha. Raha mitady hanofa kely na minivan ao amin'ny Madrid Van, hojerentsika ny taha isan-kerinandro ny faran'ny herinandro sy ny fanofana 6 / 7 / 12 / 16 / 19 / 25 / 35 / 50 / 54 sy ny toerana toy ny Minivan 70 Mercedes Class V for 7 olona, ​​Mercedes Sprinter iray minibus amin'ny fahaizana ho an'ny mpandeha 16 na 30 Mercedes microbus ho an'ny olona.
Mitady aho Rentrée de minibus ho an'ny famindrana fiantsonan'ny serivisy Madrid
Hihaona ny minibuses sy ny bisy misy any amin'ny seranam-piaramanidina sy ny Bokin'i Madrid ny solika mora minivan ho 7 seater minibus, ny minivan Mercedes Class V, azo antoka sy azo antoka 12 minivan mpandeha.
Raha mila famolavolavola mini familiana lehibe ianao, dia mametraha famandrihana ho an'ny Mercedes Sprinter ary mametraka minibus ho an'ny olona 8, na misy fiaramanidina misy seza 8 miaraka amina seza fahatelo.
Jereo ny momba anay vidin'ny, famindrana fianjerana Madrid, mba hanofa rivotra malemy, toy ny Mercedes Viano miaraka amina fiovana miavaka, misy seza malalaka ho an'ny mpandeha 7 sy ny entany na ny fiarandalamby Mercedes Sprinter amin'ny seza 19, fanofanana mahomby amin'ny famokarana euros ho an'ireo namanao na fianakavianao, miaraka amin'ny fisehoana an-tanàn-dehibe miavaka.
Mitady saran-dàlana ve ianao? Fantaro ny saran-dalan'ny fanananay ary manorata tranokala 9 any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid. Manofa minibus Mercedes, mahery maotera, afaka mitondra mihoatra noho ny seza 9 ny valizy, na nandriatra ny Mercedes Vito 7 olona, ​​na ny rendrarendra sur Mercedes Class V for hatramin'ny 6 olona.
Manomana fitsangatsanganana ve ianao? Fantaro ny saran-dalan'ny seranan-tsambo vitsivitsy, miaraka amin'ny mpamily fiarandalamby any Madrid, ary hamandrika microbus Mercedes Sprinter avy amin'ny 12 miaraka amin'ny mpamily iray ao amin'ny seranam-piaramanidina Madrid handeha amin'ny fomba sy ny fahalalahana.
Raha mila mitondra olona marobe amin'ny fampiasana manokana na ara-barotra ianao, dia jereo ny tolotra bisy ao amin'ny seranam-piaramanidina Madrid. Fidio ny sandan'ny habaka mety tsara na ny fanofana vanona ho an'ny zavatra ilainao, avy amin'ny fiaramanidin'ny mpandeha, ao amin'ny seranam-piaramanidina Madrid. Ankafizo ny tsara indrindra vidiny rehefa microbus amin'ny boky iray ho an'ny mpamily 8, 12 sy 16 lafiny mpandeha sliding varavarana mpandeha seza na sur 12 aoriana-kodiarana fiara (RWD). Alaivo ny minibus ho an'ny mpandeha 15 sy 19 na tranokala Mercedes amin'ny seza 17, na jereo ny soso-kevitra ao amin'ny tranonkala
Manana mpamaky Anglisy izahay, manana traikefa sy fahalalana momba ny fifindra-monina ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Madrid. Ny tolotra ataonay dia mifototra amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, ohatra:
Hi, mila mila aho Fiovana amin'ny seranam-piaramanidina Madrid BarajasIzahay ny vondrona mpianatra izay tonga avy tany Berlin, ny fiaramanidina tonga tany momba ny 11: 00 ihany, ary rehefa niantso ny mangataka ny notsongaina izahay, dia nambaranay facilitásemos ny fiaramanidina FR2528 isa izany, tonga ny T4S alalan'ny terminal, araka ny dia ho tonga amin'ny 6 isika: 54 amin'ny maraina eo anelanelan'ny zavatra sasany sy ny hafa handao ny Tafika amin'ny seranam-piaramanidina Madrid momba ny 7: 45, dia tokony hitondra antsika any amin'ny afovoan'i Madrid.
Miarahaba Azucena, aza manahy, ny varotra mpiasa no hikarakara ny teti-bola ny seranam-piaramanidina famindrana, koa dia maneho ny fotoana hanamarina antsika ny isan'ny toerana izay handeha amintsika avy any amin'ny seranam-piaramanidina ho any Madrid, dia mety hanamaivana ny vidiny nefa ianao mbola dingana vidiny ho an'ny kianja 16 sy efamira 20. Rehefa manamafy ny asa, azafady no angatahintsika, resend mailaka aho nanao hoe: manaiky ny teti-bola, na manome antsika a reply, ary nandray ny teti-bola indray mandeha indray andro mialoha ho amin'ny fanompoana ny sampan-draharahan'ny fifamoivoizana dia haniraka ny SMS ny fahalalana mikasika ny mpamily ary mailaka miaraka amin'ny fampahalalana rehetra momba ny tolotrareo
Madrid dia tanàn-dehibe, ary be dia be ny mandinika sy hahita, nanofa fiara fitateram-bahoaka na minibus, sy ny safidy tsara indrindra dia ny orinasa #torresbus mpanazatra, fiara fitateram-bahoaka mba hitondra antsika amin'ny seranam-piaramanidina Madrid Barajas Adolfo Suarez, any afovoan-tanàna. Afaka mahazo intsony ny fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny Plaza de Cibeles ka jereo iray amin'ireo trano tsara tarehy indrindra ao Madrid rehetra, ny Filan-kevitry ny Tanàna raha ny marina dia mijery toy ny lapan'i Reyes. Aiza no tokony halehako? Safidy iray hafa koa ny hanohizana an'i Calle Alcalá, manomboka amin'ny Puerta del Sol malaza, akaikin'ny Ben'ny Tanàna Plaza, ianao dia mety amin'ny "fo", ny fo amin'i Madrid. Ny olona tonga eto mba Hiarahana amin'ny namana, hankafy ny fitiavana, mipetraka ao amin'ny trano fisotroana kafe, haka Tapas, miaraka amin'ny divay tsara eo an-toerana na mamelombelona labiera.
fangatahana na fanofana fiara madinika ho an'ny famindrana serivisy Madrid Barajas
Famindrana any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid transfere transfere | fiaramanidina shuttle Desambra 2nd, 2018Fampiofanana mpampiofana